Ndị ozi China na ASEAN ga-enwe nzukọ mberede coronavirus na Laos
Home » Nchedo njem na Mberede » Ndị ozi China na ASEAN ga-enwe nzukọ mberede coronavirus na Laos
The Òtù Mba Ndị Dị n'Ebe Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia (ASEAN) na China na-eme atụmatụ ịme ogbako mberede, nke ga-eme na mbido February 20 na Laos, iji kpaa maka nke ọhụrụ nje Corona ntiwapụ ọrịa.
Dabere na isi okwu ndị nnọchi anya gọọmentị, nzukọ mberede nke ndị ozi mba ofesi ASEAN bu n'obi ịkekọrịta ozi ma melite nhazi n'etiti China na mba iri iji luso nje a agha.
Achọpụtara coronavirus ọhụrụ na China, ebe ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ anwụ karịrị 1,000, ma gbasaa na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba ndịda ọwụwa anyanwụ Eshia niile. Ihe na-ebili na mpaghara ahụ, nke dabere na azụmaahịa na njem ndị njem na China. Mba dị iche iche emeela ihe dịka igbochi njem, ọbụlagodi na ha na-akwado maka mmetụta akụ na ụba nke ntiwapụ ahụ.
Ọ bụ ezie na ASEAN na Beijing nwere echiche dịgasị iche iche n'ọtụtụ okwu, dị ka ịkọ banyere mpaghara mpaghara Oké Osimiri South China, ha nwere otu ihe na-amasị ha n'ịgba ume ka azịza zuru ụwa ọnụ banyere ọrịa a na ịgbalị ibelata nchegbu ọha na eze.
ASEAN ndị ozi ala ọzọ mere ezumike kwa afọ ha naanị ọnwa gara aga na Vietnam, mba na-eje ozi dị ka onye isi oche nke mkpakọrịta n'afọ a.
Seychelles gosipụtara na mmemme "Voyages et évasion" na Réunion
ATM: Oge ezumike dị mkpirikpi iji kpoo 38% mmụba nke ndị ọbịa na Saudi Arabia site na 2024